भालुले क्षतबिक्षत बनाएको किशोरको अनुहार सर्जरी गरि मिलाइयो - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ अन्य ∕ भालुले क्षतबिक्षत बनाएको किशोरको अनुहार सर्जरी गरि मिलाइयो
भालुले क्षतबिक्षत बनाएको किशोरको अनुहार सर्जरी गरि मिलाइयो
हेल्थ आवाज शुक्रबार, २०७६ भदौ १३ गते, ११:५५ मा प्रकाशित
काठमाडौं । भालुको आक्रमणमा क्षतबिक्षत भएको एक किशोरको अनुहार काठमाडौंको बसुन्धरास्थित कान्तिपुर डेन्टल अस्पतालले शल्यक्रिया गरेर जोडिदिएको छ । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका ११ का १६ वर्षीय प्रकाश तामाङको क्षतबिच्छेद अनुहारको ओरल एन्ड म्याक्जिलो क्रेनियो फेसियलद्धारा जोडिएको हो । डा. सुमित सिंहको नेतृत्वको टोलीले साढे साता घन्टा लामो शल्यक्रिया गरेर अनुहार जोडिदिएको हो ।
यही ४ भदौमा घरनजिकैको बारीका घाँस काट्न जाँदा प्रकाशलाई भालुले आक्रमण गरेको थियो । आक्रमणबाट प्रकाशको अनुहार क्षतविच्छेद भएको थियो भने शरिरका विभिन्न भागमा चोट लागेको थियो । गम्भीर घाईते भएका उनलाई तत्काल त्रिवि शिक्षण अस्पताल पु¥याइएको थियो । शिक्षणले लगत्तै कान्तिपुर डेन्टल रिफर गरेको थियो ।
तामाङको अवस्थामा क्रमिक सुधार आएको अस्पतालले जनाइएको छ । ‘प्रकाशको मस्तिष्कबाट सीएसएस नामक तरल पर्दाथ चुहिरहेको थियो भने गाला तथा नाकमा प्वाल परेको थियो । हाम्रो टिमले क्वीक रेस्पोन्स गरी शल्यक्रिया गर्यौ’ अस्पतालद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उपचारमा संलग्न डा. सिहका अनुसार शल्यक्रियाका लागि घाइतेकै शरीरका विभिन्न ठाँउबाट हड्डीका टुक्रा झिकेर जोडिदिएको थियो ।